Uncategorized – Page2– SUNNY Tech News
တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် နည်းပညာအပြောင်းအလဲတွေက Smart Phone လောကကို သိသိသာသာ ရိုက်ခက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေပါဝင်တဲ့ အခုလက်ရှိရေပန်းစားနေတဲ့ စမတ်ဖုန်း(၅)မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ iPhone 11 Camera ပိုင်းမှာ dual camera၊ ultra wide function နဲ့ night mode တွေကြောင့် အရင် iPhone တွေထက်ပိုပြီး resolution ကောင်းတဲ့ပုံတွေရမှာပါ။ animoji နဲ့ slomo selfies တွေရလာပြီး face ID sensor ပိုမြန်လာမယ်၊ ရေစိုလည်းခံပါတယ်။ Apple ရဲ့ A13 Bionic chip ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် smart phone တွေမှာ လုပ်ဆောင်မှုအမြန်ဆုံးလို့ပြောရမှာပါ။ ရွေးစရာအရောင်တွေအများကြီးရှိတာကလည်း သူ့ရဲ့အားသာချက်ပါပဲ။ Samsung Galaxy NoteContinue reading “‘2020’ မှာ ဘယ် Smart Phone တွေက လတ်တလော လူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်နေလဲ?”
Posted byDaxDo 30th Oct 2020 22nd Nov 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ‘2020’ မှာ ဘယ် Smart Phone တွေက လတ်တလော လူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်နေလဲ?
အခုလက်ရှိမှာ Work from home လုပ်နေရတဲ့သူတွေများလာပြီဆိုတော့ အလုပ်တွေကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမြောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ Home office လေးတစ်ခုဖန်တီးချင်ရင် ဘယ်လိုနည်းပညာပစ္စည်းတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…. 1. Laptop/Desktop အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကအလိုအပ်ဆုံးပစ္စည်းကတော့ Laptop ဒါမှမဟုတ် Desktop တစ်လုံးဆိုတာ ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ရုံးလုပ်ငန်းတွေကို အချိန်မှီ ပြီးစီးနိုင်ဖို့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြီး ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ laptop တစ်လုံးလောက်တော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်။ 2. Noise-cancelling headphones လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အချိတ်အဆက်မိမိအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် team meeting နဲ့ group call တွေမှာ ထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ Noise-cancelling Headphone ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိထားရင် အိမ်ကလူတွေရဲ့စကားသံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်လို့ အာရုံရှင်းရှင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ။ 3. Coffee Maker တစ်နေကုန်အလုပ်တွေလုပ်နေရပြီးခေါင်းမကြည်ရင် ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်က သင့်ကိုလန်းဆန်းသွားစေမှာပါ။Continue reading “Tech Products to keep you productive for Work-From-Home | Work-from-home အတွက် မရှိမဖြစ်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများ”
Posted byDaxDo 27th Oct 2020 28th Oct 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on Tech Products to keep you productive for Work-From-Home | Work-from-home အတွက် မရှိမဖြစ်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းများ
စက်ရုပ်တွေရဲ့ မြင့်မားလာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က Covidကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှ ဘယ်လောက်အထိ အထောက်အကူပြုနိုင်နေပြီလဲ? ၂၀ရာစုအလွန်မှာ AI ( Artificial Intelligence ) နည်းပညာနဲ့စက်ရုပ်တွေက လူသားအလုပ်သမား တွေနေရာမှာ အစားထိုးနိုင်လောက်တဲ့ထိ အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာကြပါတယ်။ ခုဆိုရင် စက်ရုပ်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာ တခြားနယ်ပယ်တွေမှာသာမက အခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ COVID ကာကွယ်ရေးအတွက်ပါ အသုံးဝင်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် လတ်တလော COVID ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ စက်ရုပ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့ကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ အခြေစိုက် ZMP ( Zero Moment Point ) Company ဟာ စက်ရုပ်တွေ၊ မောင်းသူမဲ့ကားတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေ တဲ့ နာမည်ကြီး company တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ZMP company ရဲ့Continue reading “COVID and the rise of ROBOTS!”
Posted byDaxDo 26th Oct 2020 28th Oct 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on COVID and the rise of ROBOTS!
အရေးတကြီးသွားစရာရှိလို့ ကားပိတ်နေရင် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရောက်အောင် သွားလို့ရမယ့် “Iron Man Suit“. လမ်းပေါ်မှာကားတွေပိတ်နေတဲ့ပြဿနာကတော့ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကြုံတွေ့နေကျ အခြေအနေတစ်ခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သာမန်အချိန်မှာတော့ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် တကယ်အရေး ကြီးကိစွရှိတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးအာရုံနောက်စရာပါ။ အခုဆိုရင် အဲ့လိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Jet Suit ကို Lake District မှာစတင်အသုံးပြုပြီး လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ပေးနိုင်နေပါပြီ။ ဒီ Jet Suit ကိုတီထွင်ရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူနာတွေကို အချိန်မှီကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးပေါ်ဆေးရုံလုပ်သားတွေ အသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Great North Air Ambulance Service ကနေ စမ်းသပ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီ Jet Suit ဟာ အရေးပေါ်လူနာတွေဆီကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပျံသန်းပြီး ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ GNAAS နဲ့ GravityContinue reading “Traffic on the street? How about wearing this Iron Man suit to work?”
Posted byDaxDo 23rd Oct 2020 28th Oct 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on Traffic on the street? How about wearing this Iron Man suit to work?